Famelomana Indray Ny Teny Powhatan · Global Voices teny Malagasy
Famelomana Indray Ny Teny Powhatan
Voadika ny 07 Oktobra 2013 0:31 GMT
Hijery ny Ashland, VA 23005 amin'ny sarintany ngezangeza kokoa
Nisedra olana tamin'ny fitadiavana olona miteny ny fitenin'ny teratany (Indiana-Amerikana) ireo mpanatontosa ilay horonantsarimihetsika tamin'ny taona 2005 mitondra ny lohateny hoe “Tontolo vaovao,” izay mitantara momba ny fanorenana ny tanàna voanjo Jamestown tao Virginia, ao Etazonia tamin'ny taon-jato faha-17. Fantatra fa efa maty ny teny Powhatan na teny Algonquine, taonjato roa mahery lasa izay. Amin'ny alalan'ny fikarohana ambony vao haingana sy ny fisian'ny lisitr'ireo voambolana, miezaka manangana indray ny teny ireo mpandala ny fiteny mba hanakaikezana kokoa amin'ny tena izy ho fanatanterahana ilay horonantsary.
Ny antony lehibe nahatonga ny tsy fampiasana intsony ity fiteny ity dia ny fandraràn'ny lalàna azy nandritra ny taona maro, saingy taty aoriana, nipoitra indray izany fiteny izany ary nahaliana tanteraka ny hamelomana azy indray. Dingana kely amin'ny famelomana ny teny ny asa tontosa tamin'ilay horonantsarimihetsik'i Hollywood. Niditra an-tsehatra i Ian Custalow, mpikambana ao amin'ny foko Mattaponi, izay miasa fatratra amin'ity tanjona feno fanamby hampiverenana indray ity fiteny maty ity mba ho amin'ny satan'ny fiteny ahiana ho faty izy. Nanatontosa asam-panangonana tahirinkevitra izy, ary angamba iray amin'ireo mpampiasa mavitrika indrindra amin'ity fiteny ity. Mba hanamaroana kokoa ireo mpiteny ny fiteny, nanome fampianarana ny fiteny ho an'ireo mpianatra amin'ny sokajy taona rehetra izay mpikambana ao amin'ny foko ao amin'ny Kaonfederasiona Powhatan izy amin'ny alalan'ny fitsidihana matetika ireo fiarahamonina isan-karazany manerana ny Fanjakana.
Mitady ny fomba fandraisana anjaran'ny tambajotran'ny fiarahamonina sy ny teknolojia hafa izy ankehitriny ho famenon-desona amin'ny fampiroboroboana ny teny, fa fomba iray izany hanatratrarana ny tanjona ho famelomana indray ny fiteny. Ankoatra ny fananganana rakibolana amin'ny aterineto, sy kitendry ho an'ny finday raitra sy ny solosaina, manantena izy fa ho mpanentana goavana sy fomba iray hifandraisana amin'ireo olona vaovao te-hianatra ny fiteny amin'ireo foko isan-karazany tahaka ny Mattaponi, Pamunkey, Mattaponi ambony toerana, Patawomeck, Rappahannock, Chickahominy, Chickahominy Atsinanana ary Nansemond ireo fitaovam-pampitambaovaon'olo-tsotra sy tambajotran'ny fiarahamonina hafa . Ny fanantenana, araka ny filazan'i Custalox, dia ny “hahatonga ny fitenin'ny fiarahamonina Amerikana teratany izay fiteny efa maty sy zara raha fantatra mba ho velona indray”
Habaky ny tetikasa: Hoavy tsy ho ela
Tetikasa bilaogy: Famelomana indray ny teny Powhatan RSS
Azia Atsinanana 21 minitra izay